Maqaal – Khayre oo Taageero ka Raadinaya Kenya iyo Norway | HalQaran.com
Home Opinion Maqaal – Khayre oo Taageero ka Raadinaya Kenya iyo Norway
Tartanka u dhexeeya madaxwaynaha Maraykanka, Donald Trump iyo musharax Joe Biden waxaa midba midka kale ku eedeeya oo ku dhaleeceeya inuu xiriir ganacsi iyo mid siyaasadeed la leeyahay dawlado shisheeye, ama dhismayaal iyo xisaab bankiyeed ku leeyahay waddamo kale.
Siyaasiyiinta waddamada reer galbeedka, gaar ahaan kuwa leh han siyaasadeed way iska ilaaliyaan inay xiriir sumcadooda dhaawici kara la yeeshaan dawlado, ama shirkado shisheeye oo loo arko inay cadow u yhiin dalkooda.
Taa baddalkeeda in badan oo ka mid ah siyaasiyiinta Soomaalida, gaar ahaan kuwa mucaaradka ah oo u tartamaya xilalka ugu sarreeya waddanka waxay si wayn u maal gashadaan waddamo cadow u ah Soomaaliya oo aan rabin in Soomaaliya yeelato dawlad awood leh oo dalka iyo dadka midaysa, horumar iyo nabadna gaarsiisa.
Siiyaasiyiinta Soomaalidu waxay ku faanaan inay xiriir dhow la leeyihiin madaxda waddamada cadowga u ah Soomaaliya, waddamadaas oo dano gaar ah ka leh Soomaaliya, waxayna isku soo sawiraan iyagoo la fadhiya ama la shiraya madaxda waddamadaas.
Shirarka ay la yeeshaan madaxda shisheeyaha waxaa looga hadalaa sidii siyaasiga Soomaaliga ah u heli lahaa taageero dhaqaale oo ku bixiyo tartankiisa si uu hankiisa siyaasadeed u gaaro, isaguna uu oggolaado meel marinta danaha shisheeyaha kuwaas oo badanaa ah kala qaybinta Soomaalida iyo hor istaagidda dawladnimada Soomaaliya.
Tusaale ahaan, Axmed Madobe wuxuu oggol yahay in Jubaland lagu daro Kenya. Xasan Cali Khayre wuxuu diyaar u yahay in dacwadda badda laga soo celiyo Maxkamadda isla markaana Kenya iyo Soomaaliya ay toos uga wada hadlaan arrinta. Siciid Deni wuxuu Dekedda Bosaso iyo garoonka diyaaradaha ee Garowe iyo kan Bosaso ku wareejiyay shirkado calooshood u shaqaysta yaal ah macdanta ka gurta bariga Soomaaliya.
Waxaan maqli jiray “Kullu Shay Yarjic Ilaa Aslihi.” Xasan Cali Khayre tartankiisii wuxuu ka bilaabay Nairobi, halkaas oo uu ku noolaa muddo dhowr iyo toban sano ah ka hor intii aan loo magacaabin Raiisul Wasaaraha. Markii uu Nairobi tagay wuxuu la kulmay siyaasiyiin Kenyan ah oo caan ku ah nacaybka Soomaalida, sida xoghayaha guud ee wasaaradda arrimaha dibada ee Kenya, Macharia Kamau , intii uusan jaaliyadda Soomaalida ee Kenya la kulmin.
Kadib, Khayre wuxuu aaday dalka Norway oo uu qaxooti ku ahaan jiray, Passport-na ka haysto.
Waxaa la yaab leh sababta Khayre iyo siyaasiyiinta kale ee raba inay Soomaaliya madax ka noqdaan aysan taageero uga raadinayn shacabka Soomaaliyeed balse ay ugu meeraystaan oo taageero uga raadinayaan dalal shisheeye.
Dad noocaas ah oo markasta oo ay taageero u baahdaan booqda oo la shira madaxda shisheeyaha iyagoo degaya Hotelada caasimadahooda, sidee loogu aamini karaa danaha iyo hoggaaminta dawladda Soomaaliya, iyo mustaqbalka ubadka Soomaaliya.
Siyaasiyiinta mucaaradka ah oo ay ugu horreeyaan Khayre, Deni, Madobe, Shiikh Shariif, ina Cabdishakuur, Cabdiwali Gaas, Faroole, ina Cabdirashid oo xiriir hoosaadka la leh shisheeyaha iyo cadowga Soomaaliya waa inaan la siin fursad ay talada dalka ku qabtaan, waayo waxay la shaqaystaan cadow aan rabin rabin dawladnimadeena iyo mustaqbal wanaagsan u diyaarino carruuteena.
Xasan Cali Khayre, Siciid Deni, Axmed Madobe wax badan bay is qariyeen laakiin hadda waxay la soo ban baxeen asalkoodii iyo wixiii ay qarsan jireen oo ahaa inay shisheeye u adeegaan iyo inay dhabar jabiyaan dawladnimada Soomaaliya.
Khayre oo Taageero ka Raadinaya Kenya iyo Norway